Baịbụl Ò Nwere Ike Inyere M Aka Ka Obi Kwụsị Ịma M Ikpe, Ka A Gbaghara M, na Ka Obi Ruo M Ala?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bislama Brazilian Sign Language Catalan Cebuano Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Chiyao Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Korean Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Myanmar Ndonga Norwegian Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Tzotzil Ukrainian Umbundu Valencian Vietnamese Yoruba Zulu
Baịbụl Ò Nwere Ike Inyere M Aka Mgbe Obi Na-ama M Ikpe?
Ee. Baịbụl ga-enyereli anyị aka ka obi kwụsị ịma anyị ikpe. (Abụ Ọma 32:​1-5) Ọ bụrụ na e nwere ihe na-adịghị mma anyị mere ma mechaa chegharịa, Chineke ga-agbaghara anyị ma nyere anyị aka ka obi ghara ịna-ama anyị ikpe. (Abụ Ọma 86:5) Baịbụl gosiri na obi ịma mmadụ ikpe na-aba uru mgbe ụfọdụ. O nwere ike ime ka mmadụ kwụsị ime ihe na-adịghị mma, ma gbalịsie ike ka ọ ghara ime ya n’oge ọzọ. (Abụ Ọma 51:17; Ilu 14:9) Mana, Baịbụl dọrọ aka ná ntị ka anyị ghara ikwe ka obi anyị maa anyị ikpe gabiga ókè, ikekwe ruo nke ilewe onwe anyị anya ka ndị na-abaghị uru n’anya Chineke. Ọ bụrụ na anyị emee otú ahụ, o nwere ike ime ka anyị ‘daa mbà.’​—2 Ndị Kọrịnt 2:7.
Gịnị nwere ike ime ka obi mawa mmadụ ikpe?
Olee ihe m nwere ike ime ka obi kwụsị ịna-ama m ikpe?
Amaokwu Baịbụl ndị kwuru maka obi amamikpe na mgbaghara
E nwere ọtụtụ ihe nwere ike ime ka obi na-ama anyị ikpe. Obi anyị nwere ike ịgwa anyị na anyị emejọọla onye anyị hụrụ n’anya ma ọ bụ na anyị emeghị ihe anyị ma na anyị kwesịrị ịna-eme. Mgbe ụfọdụ, obi nwere ike ịna-ama anyị ikpe mgbe anyị na-emeghị ihe obi kwesịrị iji mawa anyị ikpe. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na anyị ekpebie ime ihe anyị na-agaghị emeli, obi nwere ike ịna-ama anyị ikpe mgbe ọ bụla anyị na-emelighị ihe ahụ. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji na-agba anyị ume ka anyị na-atụ anya ime ihe ndị anyị ga-emeli.​—Ekliziastis 7:16.
Kama ikwe ka obi amamikpe mee ka ike ụwa gwụ gị, mee ihe ị ga-emeli iji mezie ihe ị na-emetaghị. Olee otú ị ga-esi eme ya?
Kweta na i mejọrọ ihe. Rịọ Jehova * Chineke n’ekpere ka ọ gbaghara gị. (Abụ Ọma 38:18; Luk 11:4) Chineke ga-aza ekpere gị ma ọ bụrụ na i chegharịala, gosi na ihe i mere wutere gị, ma na-agbalịsi ike ka ị ghara ime ya ọzọ. (2 Ihe E Mere 33:13; Abụ Ọma 34:18) Ọ na-ahụ ihe dị mmadụ n’obi, nke mmadụ ọ bụla na-anaghị ahụ. Mgbe Chineke hụrụ na anyị na-agbalị ịkwụsị ihe na-adịghị mma anyị na-eme, ọ na-egosi anyị na ọ bụ onye “kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, nke mere na ọ ga-agbaghara anyị mmehie anyị.”​—1 Jọn 1:9; Ilu 28:13.
N’eziokwu, ọ bụrụ na e nwere onye i mejọrọ, ọ ga-adị mma ma i kweta na i mejọrọ ma si n’ala ala obi gị rịọ onye ahụ mgbaghara. Ime ihe a nwere ike ọ gaghị adịcha mfe. Ma ka i nwee ike ime ya, ị ga-adị umeala n’obi ma nwee obi ike. Mmadụ iji obi ya niile rịọ mgbaghara nwere uru abụọ dị mkpa ọ bara: Ọ na-eme ka obi ruo gị ala, meekwa ka gị na onye ahụ dịwakwa ná mma.​—Matiu 3:8; 5:​23, 24.
Tụgharịa uche n’amaokwu Baịbụl ndị kwuru banyere ebere Chineke. Dị ka ihe atụ, ka anyị lebagodị anya na 1 Jọn 3:​19, 20. N’ebe a, Baịbụl kwuru na “obi anyị nwere ike ịma anyị ikpe” nke pụtara na anyị nwere ike ịna-akatọ onwe anyị, ikekwe anyị echewe na anyị erughịzi eru Chineke ịhụ anyị n’anya. Ma, amaokwu Baịbụl ahụ kwukwara na “Chineke karịrị obi anyị.” Olee otú o si karịa ya? Chineke maara ihe niile gbasara anyị, ọ ghọtakwara nnọọ otú anyị si eche echiche na ihe ndị anyị na-anaghị emetecha. Ọ makwa na anyị bụ ndị na-ezughị okè, nakwa na anyị nwere ike ime mmehie. * (Abụ Ọma 51:5) N’ihi ya, ọ na-agbaghara onye ọ bụla gosiri n’eziokwu na ihe ọjọọ o mere wutere ya.​—Abụ Ọma 32:5.
Anọla na-eche banyere ihe ndị i mejọrọ n’oge gara aga. Baịbụl kọrọ akụkọ ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị mere ihe ndị na-adịghị mma ma mechaa gbanwee. Otu n’ime ha bụ Sọl, onye Tasọs, onye e mechara kpọwa Pọl onyeozi. Mgbe ọ bụ onye Farisii, ọ kpagburu ndị na-eso ụzọ Jizọs n’ụzọ kpụ ọkụ n’ọnụ. (Ọrụ Ndịozi 8:3; 9:​1, 2, 11) Ma mgbe o mechara mata na ọ bụ Chineke na Mezaya ahụ, ma ọ bụ Kraịst, ka ya na-emegide, o chegharịrị, gbanwee ndụ ya, ma ghọzie Onye Kraịst e ji ama atụ. O doro anya na ihe ndị ahụ Pọl meburu na-ewute ya, ma ọ nọghị na-eche banyere ha. Pọl maara na Chineke meere ya ebere, n’ihi ya, o ji obi ya niile kwusaa ozi ọma, o chefughịkwa nkwa ndụ ebighị ebi Chineke kwere ya.​—Ndị Filipaị 3:​13, 14.
Abụ Ọma 51:17: “Chineke, ị gaghị eleghara obi tiwara etiwa, nke nọ ná mwute, anya.”
Ihe ọ pụtara: Chineke ga-agbaghara gị ihe ndị i mejọrọ ma ọ bụrụ na ihe i mere wutere gị n’eziokwu. Ọ na-eme ebere.
Ilu 28:13: “Onye na-ezochi ajọ omume ya agaghị enwe ihe ịga nke ọma, ma onye na-ekwupụta ya ma na-ahapụ ya ka a ga-emere ebere.”
Ihe ọ pụtara: Ọ bụrụ na anyị ekwupụtara Chineke mmehie anyị ma kwụsị ihe ọjọọ ahụ, Chineke ga-agbaghara anyị.
Jeremaya 31:34: “M ga-agbaghara ha njehie ha, agakwaghị m echeta mmehie ha.”
Ihe ọ pụtara: Chineke gbagharahaala anyị, ọ naghị echetara anyị mmehie ahụ ọzọ. Ọ na-agbaghara kpamkpam.
^ par. 4 Baịbụl kwuru na aha Chineke bụ Jehova.​—Ọpụpụ 6:3.
^ par. 6 Ọ bụ mmehie anyị butere n’aka nwoke mbụ, bụ́ Adam, mere anyị ji achọkarị ime ihe ọjọọ. Adam na Iv, nwunye ya, mere mmehie megide Chineke, si otú ahụ ghọzie ndị na-ezughị okè nakwa ndị na-agaghị adịli ndụ ebighị ebi. Ha bufekwaara ụmụ ha nsogbu ndị a.​—Jenesis 3:​17-19; Ndị Rom 5:12.
Obi Amamikpe—Ọ̀ Dị Njọ Mgbe Nile?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Baịbụl Ò Nwere Ike Inyere M Aka Mgbe Obi Na-ama M Ikpe?
ijwbq isiokwu 175